घरमै गम्भीर, अस्पताल लैजाँदा मृत्यु- समाचार - कान्तिपुर समाचार
अस्पतालमा बेड नपाएर होम आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने संक्रमितको बाध्यता छ । संक्रमणले च्यापेपछि अस्पताल चहार्दाचहार्दै संक्रमितको ज्यान जाने गरेको छ ।
वैशाख २६, २०७८ सन्जु पौडेल, माधव अर्याल, वीरेन्द्र केसी
रुपन्देही, पाल्पा, अर्घाखाँची — तिलोत्तमा–५ का ८३ वर्षीय वृद्धलाई १५ दिनअघि रुघाखोकी लाग्यो । ज्वरो आयो । जीवनमा सिटामोल आवश्यक नपरेका उनलाई एक्कासि अक्सिजन खाँचो पर्‍यो । परिवारले कोरोना संक्रमणको आशंकामा स्वाब परीक्षण गराए । संक्रमण पुष्टि भएपछि घरमै रेखदेख सुरु गरे ।
‘अस्पतालमा बुझ्दा कतै बेड पाइएन,’ उनकी जेठी छोरीले भनिन्, ‘त्यसपछि नर्स बोलाएर घरमै अक्सिजन चढायौं ।’ घरमै ६ सिलिन्डर चढाए पनि अक्सिजनको मात्रा बढेन । त्यसपछि अस्पताल चहारेर बेड खोजी गरे । कतै बेड पाइएन । ‘त्यसपछि घरमै राख्न बाध्य भयौं,’ छोरीले भनिन्, ‘बुबाको अन्तिम छटपटी हेर्न मात्र सक्यौं, उहाँका आँसु पुछ्न सकेनौं ।’
कोरोना संक्रमणले बुटवल–११ का ३२ वर्षीय युवकको शुक्रबार मृत्यु भयो । ज्वरो आएपछि उनले केही दिन मेडिकलबाट औषधि किनेर खाएका थिए । एक्कासि श्वासप्रश्वासमा समस्या भएपछि उनलाई हाइफ्लो अक्सिजन र आईसीयू बेड आवश्यक पर्‍यो । त्यसपछि आफन्तले कोरोना अस्पतालमा बेड खोजे । कतै पाइएन । अन्तिममा भैरहवास्थित भीम अस्पतालमा पुर्‍याए । त्यहाँ बेडको प्रतीक्षामा एक रात भुइँमै बिताए । ‘बेड खाली नहुँदै उनले अन्तिम सास फेरे,’ मृतकका आफन्त गोपाल परियारले भने ।
रोहिणी गाउँपालिकास्थित अस्थायी अस्पतालमा बिहीबार दुई संक्रमितले ज्यान गुमाए । रोहिणी–२ का ६० वर्षीय र २२ वर्षीय पुरुषको आईसीयू बेड नपाएर ज्यान गएको अस्थायी अस्पतालका डा. उमेश गुप्ताले बताए । संक्रमण पुष्टि भएपछि उनीहरू एक साता होम आइसोलेसनमा बसेका थिए । अक्सिजन आवश्यक परेपछि अस्थायी अस्पतालमा ल्याइएका उनीहरूको बिहीबार राति मृत्यु भएको उनले बताए ।
अस्पतालमा उपलब्ध सबैभन्दा धेरै लिटरको अक्सिजन जडान गर्दा पनि लेभल नबढेपछि आईसीयू खोजी गरेको र नपाइएको उनले बताए । पाल्पाको तानसेन नगरपालिका–३, भगवती टोलका ५६ वर्षीय पुरुषले संक्रमित भए पनि आफ्नो ख्यालै गरेनन् । बिहीबार बजारमा तरकारी लिन पुगेका थिए । रक्तचापका बिरामी उनलाई त्यही साँझ अस्पताल लैजानुपर्ने भयो । परिवार र आफन्तले शुक्रबार उनलाई लिएर अस्पताल चहारे । कतै आईसीयू, भेन्टिलेटर पाएनन् । शुक्रबार साँझ उनको मृत्यु भयो ।
होम आइसोलेसनमा बसिरहेका कोरोना संक्रमितले अस्पतालको मुख नदेखेरै ज्यान गुमाउने क्रम बढ्दै गएको छ । संक्रमणले च्यापेपछि अस्पतालतिर दौडाइए पनि अस्पताल चहार्दाचहार्दै संक्रमितको ज्यान जाने गरेको छ । अस्पतालमा बेड नपाएर होम आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने अधिकांश संक्रमितको बाध्यता छ । कतिपयलाई भने सामान्य लक्षण देखिँदासम्म बेवास्ता गर्दा पनि संक्रमणले जटिल अवस्थामा पुर्‍याउने गरेको छ ।
निस्दी गाउँपालिका–५, गल्धाका २८ वर्षीय संक्रमित युवाका परिवारले तानसेनको मिसन अस्पताल र लुम्बिनी मेडिकल कलेजमा बेड पाइन्छ कि भन्दै चहारे । कतै बेड पाएनन् । एम्बुलेन्समा फर्किंदै गर्दा रामपुर नगरपालिका–९, जब्गादीमा अवस्था गम्भीर भयो । श्वासप्रश्वासमा समस्या भएपछि उनलाई गाउँपालिकाले निर्माण गरेको गल्धा, ढुंगानाबेंसीको आइसोलेसनमा लगियो ।
‘अक्सिजन लेबल ४५ मा झरेको थियो,’ निस्दी स्वास्थ्य शाखा प्रमुख रेमबहादुर दिशा मगरले भने, ‘उनलाई श्वासप्रश्वासमा समस्या नआओस् भनेर रातभर दुई सिलिन्डर अक्सिजन सकियो । अहिले सिलिन्डर खोज्न भौंतारिनुपरेको छ ।’
उनलाई अक्सिजन दिएर राखे पनि अवस्था गम्भीर नै छ । समयमा जानकारी नदिने र आफ्नै लापरबाहीले गर्दा ज्यान जोखिममा परेको हो । ‘कतिपय बिरामीले आफैं घर जान्छु भन्दै हिँड्दा पनि समस्या भएको छ,’ माथागढी गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख केशव जीसीले भने, ‘लापरबाहीले गर्दा आफ्नै ज्यान जोखिममा पारेको देखिएको छ ।’
गुल्मीको छत्रकोट–३ का ७६ वर्षीय पुरुषको शनिबार मृत्यु भयो । उनी पाँच दिनअघि संक्रमित भएपछि होम आइसोलेसनमै थिए । घरमा जुस, तातोपानी, जडीबुटी खाँदै बसेका थिए । छिमेकी खिमलाल पन्थका अनुसार शुक्रबार राति श्वास फेर्न अप्ठेरो भएर छटपटिए । शनिबार बिहान अस्पताल लैजान एम्बुलेन्स आइपुग्यो । त्यही बेला उनको मृत्यु भयो ।
‘श्वास फेर्न अप्ठ्यारो परेको छिनभरमै छटपटाएर ज्यान गयो,’ पन्थले भने । अर्घाखाँची अस्पतालमा तीन दिनदेखि उपचार गराइरहेकी मालारानी–६ का ५४ वर्षीया महिलाको श्वास फेर्न सकस भएरै शुक्रबार मृत्यु भयो । मृतकका आफन्तका अनुसार संक्रमित भएर अस्पताल पुगेको दुई/तीन घण्टामै उनको ज्यान गयो । ‘श्वास फेर्न गाह्रो हुने बिरामीलाई आईसीयूमा राखेर उपचार गर्नुपर्छ, अर्घाखाँचीमा आईसीयू छैन,’ अस्पताल प्रमुख डा. कपिल गौतमले भने । स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार अर्घाखाँचीमा अहिलेसम्म ३० र गुल्मीमा १६ जनाले कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाइसकेका छन् ।
प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै रूपन्देहीमा संक्रमित थपिरहेका छन् । त्यसपछि बाँकेमा धेरै संक्रमित पुष्टि हुने गरेका छन् । महामारी समुदायमा पुगेकाले केही समय संक्रमित बढ्ने देखिएको लुम्बिनी प्रादेशिक जनरल फिजिसियन डा. सुदर्शन थापाले बताए । ‘हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीको अवस्था यस्तै हो,’ उनले भने, ‘द्रुत तयारी नगरे भयावह अवस्था आउने देखिन्छ ।’ उनका अनुसार घरघरमा रहेका बिरामीको अवस्था गम्भीर बन्नाले र बेड, अक्सिजन अभाव हुँदासमेत मानिस सचेत नभएकाले समस्या बढ्ने संकेत देखिएको उनले बताए ।
प्रदेश स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटाले यहाँ रहेका मेडिकल कलेजलाई कोरोना अस्पतालका रूपमा प्रयोग गरी बेड र अक्सिजन व्यवस्थापन गर्न लागेको बताए । ‘नेपालगन्जमा लिक्विड अक्सिजन ल्याउन बाटो खुलेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसले केही सहज हुनेछ । हरेक उद्योगबाट संकलन गरिएका खाली सिलिन्डर भरेर प्रयोग गर्न लागेका छौं ।’ लुम्बिनी प्रदेशका सबै अस्पतालमा चाप छ । बेड पाइने आसमा भुइँमा बसेर उपचार भइरहेको छ । अस्पताल आउने अधिकांशलाई अक्सिजन, आईसीयू आवश्यक पर्ने चिकित्सकले बताए ।
अस्पतालमा गम्भीर बिरामी दिनहुँ थपिन्छन् । चिकित्सकका अनुसार पहिले भर्ना भएका बिरामी निको हुन समय लाग्ने देखिएको छ । निको भएपछि वा कसैको मृत्यु भए मात्र बेड खाली हुने गरेको छ । अस्पतालमा भर्ना भएका संक्रमितलाई कम्तीमा १२ र बढीमा २२ दिनसम्म बेडमै उपचार गर्नुपरिरहेको भैरहवास्थित भीम अस्पतालका कोरोना फोकल पर्सन डा. आरिफ हुसेनले बताए । उनका अनुसार भर्ना भएका बिरामीको मृत्युदर धेरै छ । भर्ना भएकामध्ये ३० प्रतिशत छिटो निको भइरहेका छन् ।
प्रकाशित : वैशाख २६, २०७८ ०८:४५
अस्पतालको सिँढीमुनि छटपटाउँदै बिरामी
वैशाख २६, २०७८ अर्जुन शाह
धनगढी — प्रदेशको रेफरल सेन्टरका रूपमा रहेको धनगढीस्थित सेती प्रादेशिक अस्पतालको आकस्मिक कक्षसमेत संक्रमित र अन्य बिरामीले भरिभराउ छ । बिरामीका आफन्त अक्सिजनका लागि भौतारिरहेका छन् ।
धनगढीको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा शय्या नपाएर आकस्मिक कक्षबाहिर पेटीमै अक्सिजन सपोर्टमा बसेका बिरामी । तस्बिर : अर्जुन शाह/कान्तिपुर
अस्पतालमा शय्या अभावले ग्यालरी, सिँढीमुनि पनि बिरामी राखिएका छन् । स्वास्थ्यकर्मीहरू हैरान छन् । अस्पताल पुगेर पनि अधिकांशले उपचार पाउन नसक्दा रोइकराइ गर्दै भगवान् पुकारिरहेका छन् ।
अक्सिजनको सबैभन्दा ठूलो संकट देखिएको छ । सेती प्रादेशिक अस्पतालमा शनिबार बिहान मृत्यु भएका दार्चुलामा कार्यरत एक कर्मचारीका परिवारले शुक्रबार रातभर अक्सिजनका लागि हारगुहार गरे पनि कतै भेटाएनन् । ‘उहाँकी श्रीमतीको आग्रहमा हामीले पनि रातभर अक्सिजन सिलिन्डर खोज्यौं तर कतै भेटाएनौं,’ धनगढीका स्वयंसेवी प्रकाश चन्दले भने, ‘अक्सिजन नपाएर मेरा श्रीमान् बित्ने हुने भो, बचाइदिनुस् भनेर उहाँले रातभर धेरैसँग याचना गर्नुभयो तर केही उपाय लागेन ।’
भयावह रूपमा फैलिएको कोरोना संक्रमणले सुदूरपश्चिमको स्वास्थ्य क्षेत्र तहसनहस हुन थालेको छ । दूरदराजका गाउँमा समेत भुसको आगोझैं संक्रमण फैलिइसकेको छ । बिरामीले उपचार पाउन सकेका छैनन् । मृत्युदर एकाएक बढेको छ । यस प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा गरी शनिबार एकै दिन १५ जनाको मृत्यु भएको निर्देशनालयले जनाएको छ ।
सुदूरपश्चिममा शनिबारसम्म मृत्यु हुनेको संख्या १ सय ९२ पुगेको छ । सुदूरपश्चिम स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार तीमध्ये १ सय १० जनाको मृत्यु पछिल्लो १० दिनयता भएको हो । वैशाख १६ गतेसम्म मृत्यु हुने संक्रमितको संख्या ८२ मात्रै थियो । सक्रिय संक्रमितको संख्या पनि त्यही गतिमा बढेको छ । सुदूरपश्चिममा सक्रिय संक्रमितको संख्या शनिबारसम्म ६ हजार ५ सय ७९ पुगेको छ । यीमध्ये पछिल्ला १० दिनमा ५ हजार १ सय ८४ जना सक्रिय संक्रमित थपिएका हुन् ।
मृत्यु र सक्रिय संक्रमित संख्या बढ्ने तुलनामा निको हुने दर निकै कम छ । पछिल्ला १० दिनमा निको हुनेको संख्या १ हजार ६ जनामात्र रहेको निर्देशनालयका तथ्यांक सहायक दिलीप भाटले बताए । सक्रिय संक्रमितको संख्या ३ हजार ३४ जनाले बढेको अवस्थामा निको भएकाको संख्या ७ सय ४६ जना मात्र छ । पछिल्लो २४ घण्टामा ६ सय ३९ सक्रिय संक्रमित थपिँदा १ सय १२ जना मात्र निको भएर घर फर्किएका छन् ।
स्वास्थ्य निर्देशक डा. गुणराज अवस्थीका अनुसार यतिबेला फैलिएको संक्रमणपछिको मृत्युदर १ दशमलव ३ छ । यसअघिको मृत्युदर शून्य दशमलव ५ थियो । डाक्टरहरूका अनुसार अहिलेका संक्रमित अधिकांशमा श्वासप्रश्वाससम्बन्धी समस्या अत्यधिक छ । सेती प्रादेशिक अस्पतालका सूचना अधिकारी दिलीपकुमार श्रेष्ठका अनुसार त्यसमा पनि तन्नेरी उमेर समूहका संक्रमितको मृत्युदर बढ्दै गएको छ । शुक्रबारसम्म मृत्यु भएकामध्ये कैलालीका सबैभन्दा धेरैको मृत्यु भएको छ ।
निर्देशनालयका अनुसार शनिबारसम्म कैलालीमा ८५ जना संक्रमितले ज्यान गुमाएका छन् । यस्तै कञ्चनपुरका ५८ जनाको मृत्यु भएको निर्देशनालयले जनाएको छ । सेती प्रादेशिक अस्पतालमा बेड नपुगेर ग्यालरीमा यत्रतत्र बिरामी छन् । अधिकांश बिरामी रोइकराइ गर्दै उपचारका लागि छटपटाइरहेका छन् । अक्सिजनको हाहाकार छ । स्वास्थ्यकर्मीहरू पनि उत्तिकै तनावमा देखिन्छन् । संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिँदै गएको अवस्थामा उपचारमा संलग्न चिकित्सकले संक्रमितले समयमै जाँच तथा उपचार नगरी ढिलो मात्रै अस्पतालमा आउने गरेकाले समस्या भइरहेको बताएका छन् ।
सुदूरपश्चिममा रेफरल अस्पतालका रूपमा रहेको सेती प्रादेशिक अस्पतालका कन्सल्टेन्ट फिजिसियन डा. नीराजनदत्त शर्मा पौडेलका अनुसार लक्षण देखिनेबित्तिकै वा शंका लाग्नेबित्तिकै जाँच तथा उपचार नगर्दा कोरोना संक्रमितको ज्यान जोखिममा परिरहेको छ । सुरुमै उपचार पाउन सके संक्रमितलाई बचाउने केही सहज हुने उनले बताए । ‘संक्रमितहरू ढिलो गरी अस्पताल आउने गरेका छन्,’ डा. पौडेलले भने, ‘त्यसबेलासम्म कतिपय बिरामीमा भित्रभित्रै निमोनिया छिप्पिसकेको हुन्छ । सुरुमा घरमै उपचार गर्न खोज्ने, उपचारमा गए पनि नजिकैको मेडिकलमा सामान्य परीक्षण गराएर औषधि सेवन गर्ने गरेको भेटिएको छ ।’
लापरबाही गर्दा संक्रमितको स्वास्थ्य जटिल बन्नुका साथै परिवार र छरछिमेकमा पनि कोरोना सरिरहेको हुने डा. पौडेलको बुझाइ छ । ‘प्रायः संक्रमितलाई हामीले मेडिकलमा सामान्य जाँच गराएर टाइफाइड र भाइरल ज्वरोको औषधि सेवन गरेको पाएका छौं,’ उनले भने, ‘रुघाखोकी, ज्वरो र टाउको दुख्ने समस्या देखिएमा तुरुन्तै अस्पताल पुगेर चिकित्सकको सल्लाहमा उपचार गराइहाल्नुपर्छ ।’